Pixel 3a kpuchiri ahịa Google na United States | Androidsis
Pixel 3a bụ otu n'ime ihe ịga nke ọma kachasị maka Google. Izu ndị a anyị enwetala ozi na -egosi na ire ekwentị ndị a na -adị ezigbo mma, na -enyere aka melite ọnụọgụ ụlọ ọrụ ahụ. A na -ekpughere ọnụọgụ maka United States, nnukwu ahịa ụlọ ọrụ, ebe enwere ike ịhụ mmetụta a.
Ụlọ ọrụ ahụ tụrụ anyị n'anya n'oge opupu ihe ubi a na ụdị ndị a, nke nọchiri anya ntinye ya n'etiti etiti. Ihe kpatara ya bụ ire ahịa dara ogbenye ya. Ka ọ were Google nwere olile anya iji Pixel 3a ndị a meziwanye ahịa ya, ihe ha na -enweta, ebe ọ bụ na ahịa ha amụbaala okpukpu abụọ na United States.
Na nkeji nke abụọ nke afọ a, dabara na mwepụta Pixel 3a, ahịa ụlọ ọrụ ejirila 88% rịa elu na United States. Ha bụ akara nke abụọ na -eto ngwa ngwa n'ahịa America n'azụ OnePlus. Yabụ na ndị a bụ ọnụọgụ dị mma maka onye nrụpụta, mgbe ahịa ọjọọ nke afọ gara aga gasịrị.
Nke a na -eme ka o doo anya na ndị na -eri ihe anabatala nke etiti a n'ahịa. Ebe ọ bụ ha na -ahụ maka ịkwọ ahịa ụlọ ọrụ n'ime ọnwa ndị a, ihe anyị na -ahụ kemgbe izu. Ahụmịhe onye ọrụ ha na -enye dị mma n'oge niile, ihe na -arụ ọrụ maka ọdịmma ha.
Ọ bụ ya mere, ọtụtụ na -atụ anya na Pixel 3a a ga -enwe ndị ga -anọchi ya n'ime obere oge, ikekwe n'afọ ọzọ. N'ịhụ ezigbo nsonaazụ ụdị ndị a na-enwe ugbu a, Google na-echebara ya echiche, ma ọ bụ ha nwere ike rụọ ọrụ na etiti ọhụrụ maka 2020.
Ka ọ dị ugbu a anyị ji n'aka hụ ka ire ahịa Pixel 3a ndị a ga -esi na -eto, ịbụ otu n'ime nnukwu ihe ịga nke ọma Google nwere kemgbe ha bidoro ekwentị n'ahịa. N'ọnwa Ọktoba nke afọ a, anyị nwere ike ịtụ anya ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, yana Pixel 4, nke na-ekwe nkwa ịhapụ anyị mgbanwe ole na ole na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Google ji okpukpu abuo ahia ya na United States maka Pixel 3a
Google Go enwere ndị ọrụ niile nọ na gam akporo